Iingxaki zethebhulethi zisonjululwe: I-Confectionery kunye nengcebiso yokunxiba - I Holland
Igama lemveliso kunye nomthamo: Iconfectionery (itshungama)
Ithebhulethi: Isikwere - 8.5 x 7.5mm
Uhlobo lweendaba: I-Fette P3000 – 55 Station
ingxaki: Ukusebenzisa izixhobo ezikhuphisanayo, umthengi wayefumana ukunxitywa kwe-punch kwangaphambi kwexesha kunye nokungahambi kakuhle phakathi kweepuntshi kunye nokufa. Izixhobo zabo zazihlala ubuninzi beenyanga ezi-6. Ukwenza izinto zibe mbi ngakumbi, babejongene nemiba emininzi ngexesha lokutyabeka iswekile kuba ithiphu yepunch eyonakeleyo ibangele ukhukuliseko olungundoqo, ukudanyaza kunye nokuqhekeka komphetho.
isisombululo: Emva kokutyelela indawo eqinisekisa ukuba i-turret yayikwimeko entle ngokubanzi, kwaye yenza i-TSAR ~ Predict, i-I Holland yacebisa kwaye yanikezela ngeeseti ze-punch ngentsimbi kunye nendibaniselwano yokugqoka eyenzelwe ukuveliswa kwesondlo. Ukunceda kwimiba yolungelelwaniso, sikwabonelele ngesixhobo solungelelwaniso.
Impumelelo: Emva kokwazisa i-coating entsha kunye nokusebenzisa isixhobo sokulungelelanisa ukufa, umthengi uqinisekisile ukuba iiseti zesixhobo esitsha zisebenza kakuhle ngaphandle kwemiba. Ngapha koko, inkqubo yokwaleka iye yaphucuka kwaye igcine umthengi ixesha kunye nemali.